မှောင်ညိုဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
မောင်း ( RPA : Hmoob) သို့မဟုတ် မောင် ( RPA : Moob) တရုတ်နိုင်ငံတွင် မြောင်းဟု သိကြသည်။  ဤစကားမျိုးဆက်သည် အနောက်မောင်းဘာသာစကားအနွယ်၏အခွဲ မောင်းဘာသာစကားကိုပြောဆိုကြပါသည်။ မောင်းစကားကို စီချွမ်, ယူနန်, ကွေးဂျိုး, ကွမ်းရှီး, ဟိုင်နန် ဗီယက်နမ် မြောက်ပိုင်း၊ ထိုင်း နှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ တွင်ပြောဆိုနေကြသည်။  ပြောဆိုသူ ၂.၇သန်းရှိရာ ထဲအထဲတွင် မောင်းအမေရိကန်ကပြား ၂၈၀,၀၀၀ကျော်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။  မောင်းဘာသာစကားပြောသူအားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများပြောဆိုနိုင်ကြသည်။ Dananshan (大南山) စကားသည်စံဘာသာစကား၏အခြေခံဖြစ်သည်။  သို့သော်မောင်ဒေါ (အဖြူ) နှင့် မောင် Njua (အစိမ်းရောင်) ကိုလာအိုနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်သာလူသိများသည်။ Dananshan သည် မောင်းဒေသတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာလူသိများသည်။
(၃.၇ million ရည်ညွှန်း 1995–2009)
hmn – ပါဝင်သော ကုဒ် for the Hmong/Mong/Miao (China, Laos) macrolanguage, including all the following varieties except hmf and hmv.
မုံ / မိုင်းစာလုံးပေါင်း
အမြင့် ˥ /pɔ́/ 'ball' po ခ
Mid ˧ /pɔ/ 'သရက်ရွက်' po
အနိမ့် ˩ /pɔ̀/ 'thorn' po s
မြင့်မားသော - ကျသွား ˥˧ /pɔ̂/ 'အမျိုးသမီး' po ည
အလယ်အလတ်မြင့်တက် ˧˦ /pɔ̌/ 'to ပစ်' po v
အနိမ့် check လုပ်ထား ( creaky ) သေံ ˩
</br> (နောက်ဆုံးစကားစု - ရှည်လျားစွာနိမ့်ကျသော ˨˩˧ ) /pɔ̰̀/ 'to see' po m
mid-ကျသွား breathy ˧˩ /pɔ̤̂/ 'အဖွား' po ဂရမ်
တမ်းပလိတ်:Interlinear:တမ်းပလိတ်:Interlinear ၂၀၁၂ တွင် မက်ဒေါ်နယ် သည်မင်နီဆိုတာပြည်နယ်၊ စိန့်ပေါလ် တွင်ကြော်ငြာထားသောကြော်ငြာများကိုအမေရိကန်၌ပထမဆုံးအကြိမ် Hmong ဘာသာစကားကြော်ငြာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘာသာပြန်မမှန်ကန်သောကြောင့်မောင်းဘာသာစကားပြောသူများအတွက်နားမလည်နိုင်ပါ။  Google Translate မေလ 2013 ခုနှစ် မောင်းဒေါ (အဘိဓာန်၌ မောင်း အဖြစ်သာရည်ညွှန်း) ပါသည်။
↑ Hmong / Miao at Ethnologue (18th ed., 2015)
Hmong Don (Vietnam) at Ethnologue (18th ed., 2015)
Hmong Dô (Vietnam) at Ethnologue (18th ed., 2015)
Mong Njua/Mong Leng (China, Laos), “Blue/Green Hmong” (United States) at Ethnologue (18th ed., 2015)
Hmong Daw (China, Laos), “White Hmong” (United States) at Ethnologue (18th ed., 2015)
Sinicized Miao (Hmong Shua) at Ethnologue (18th ed., 2015)
Horned Miao (A-Hmo, China) at Ethnologue (18th ed., 2015)
↑ (2013) "First Vernacular Hmong", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
↑ In China, Hmong is classified asavariety of the Miao languages (苗语),aterm that covers all languages spoken by the Miao ethnic group.
↑ Ratliff. Meaningful Tone: A Study of Tonal Morphology in Compounds, Form Classes, and Expressive Phrases in White Hmong. Center for Southeast Asian Studies, Northern Illinois University။
↑ Elizabeth M. Hoeffel (March 2012)။ The Asian Population: 2010။ 2010 Census Briefs။ United States Census Bureau။ 20 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cooper ကရောဘတ်, အယ်ဒီတာ။ မုံ - ရိုးရာနေထိုင်မှုပုံစံကိုလမ်းညွှန် ။ စင်္ကာပူ - Times Editions ။ 1998 စစ။ 35-41 ။
Finck, ယောဟန်။ Rhode Island ရှိ Hmong အသိုင်းအဝိုင်း Providence ရှိမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်များ။ " အနောက်ဘက် ရှိဟောင် လူမျိုးများတွင် အယ်ဒီတာများ၊ Bruce T. Downing နှင့် Douglas P. Olney တို့ဖြစ်သည်။ Minneapolis, MN: အရှေ့တောင်အာရှဒုက္ခသည်လေ့လာရေးစီမံကိန်း၊ မြို့ပြနှင့်ဒေသဆိုင်ရာရေးရာဌာန၊ မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ် ၊ ၁၉၈၂၊ စ။ 22-25 ။
Thao, Paoze, Crossroads at Mong ပညာရေး, New York: University of America, 1999, pp ။ ၁၂-၁၃ ။
Xiong Yuyou, Diana Cohen (၂၀၀၅) ။ ကျောင်းသားများ၏လက်တွေ့ကျသောတရုတ် - အင်္ဂလိပ် - လက်စွဲစာအုပ် / Npout Ndeud Xof Geuf Lol Hmongb Lol Shuad Lol Yenb ။ ယူနန်တိုင်းရင်းသားများထုတ်ဝေရေးအိမ်၊ ISBN 7-5367-3287-2 ISBN 7-5367-3287-2 ။
Enwall, Joakim ။ ဗီယက်နမ်ရှိဟောင်အရေးအသားစနစ်များ - ဗီယက်နမ်၏လူနည်းစုဘာသာစကားမူဝါဒကိုလေ့လာခြင်း ။ စတော့ဟုမ်း၊ ဆွီဒင်၊ ပစိဖိတ်အာရှလေ့လာရေးစင်တာ၊ ၁၉၉၅ ။
Lyman, သောမတ်စ်အမစ် ( Chulalongkorn တက္ကသိုလ် ) " မိုင်း (အစိမ်းရောင် Miao) နှင့်သူတို့၏ဘာသာစကား - အကျဉ်းချုပ်ပေါင်းစည်းခြင်း " ( မော်ကွန်းတိုက် ) ။ စ။ 63-66 ။
Miyake, မာ့ခ် ။ ၂၀၁၁ ။ ယူနီကုဒ် ၆.၁ ။
Miyake, မာ့ခ် ။ ၂၀၁၂ ။ Anglo-Hmong tonology ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မှောင်ညိုဘာသာစကား&oldid=518141" မှ ရယူရန်